छुटको अर्थ के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki छुट क्रेडिट
1 विश्वसनीय साझेदारहरूको लागि अल्पकालीन ऋण
2 छूट क्रेडिट को एक उदाहरण
3 एक सुरक्षित क्रेडिट को रूप मा छूट क्रेडिट
4 छूट ऋणको लागि कानूनी आधार
5 यसको अर्थमा छूट क्रेडिट
विश्वसनीय साझेदारहरूको लागि अल्पकालीन ऋण
der छुट क्रेडिट लाई पनि एक्सचेन्ज लोनको रूपमा पठाइएको छ। यो सामान्यतया बैंकिंग क्षेत्र भित्र छोटो क्रेडिटको रूपमा उल्लेख गरिएको छ। अझैसम्म बिलहरू क्रेडिट संस्थाहरू द्वारा खरिद गरिएका छैनन्। ग्राहकले विनिमयको बिल प्राप्त गर्दछ। यो राशि ग्राहकको रूपमा विचार गर्दछ। रिजर्भेसन बैंकबाट छूट कटौती गरिएको छ। छूट एक रुचि हो जसले परिपक्वतामा जम्मा गर्नेछ। त्यसपछि, ऋण बैंकमा हस्तान्तरण गरिएको छ। परिवर्तनको मितिको मितिमा, नातेदारले बैंकमा नामित रकम चुकाउनु पर्छ। लगभग सबै बैंकहरूबाट, छूट क्रेडिट विशेष रूपमा साझेदार साझेदारहरूलाई दिइएको छ। यसलाई अपेक्षाकृत राम्ररी बुझ्न सकिन्छ कि पछि हानि हुनेछैन। यस प्रकार बैंकले सबै संपार्श्विक राख्छ र जोखिम लगभग पूर्ण रूपमा हटाउन सकिन्छ।
छूट क्रेडिट को एक उदाहरण
कुनै पनि कम्पनी (X) 10.000 यूरोको अर्को कम्पनी (Y) मा सामानको सामानहरू आपूर्ति गर्दछ। कम्पनी Y ले सोध्नु भएको छ भुक्तानीको deferment 90 दिनहरूको लागि। कम्पनी एक्ससँग यो प्रस्ताव सहमत छ। Y कम्पनीमा परिवर्तन जारी गरिएको छ। यो परिवर्तनले एक्सले सम्बन्धित दावीहरूलाई बैंकमा बेच्दछ। पेआउट नम्बर क्रेडिट संस्था द्वारा5प्रतिशतले घटाइयो। यसैले परिवर्तनले 10.000 यूरोको खरीदको लागी नेतृत्व गर्दैन। यसको सट्टा, 9.875 को भुक्तान कम्पनी X लाई बनाइएको छ। कम्पनी Y ले सहमत 90 दिन पछि बैंक द्वारा प्रस्तुत गरिनेछ। यसबाट बैंक अन्तमा 10.000 यूरो प्राप्त गर्दछ।
एक सुरक्षित क्रेडिट को रूप मा छूट क्रेडिट
दावीको खरीद (विनिमयको बिल) एक सुरक्षित क्रेडिट हो। एक अपरिवर्तनीय दावी को मामला मा, विक्रेता दावी दावा देखि फिर्ता ले सकते हो। ग्राहक (उधारकर्ता) लाई सामान्यतया संस्थान द्वारा छूट क्रेडिट लाइन दिइन्छ। यो सीमा भित्र यो एक परिवर्तनशील संघीय बैंक दरमा आउन सक्छ। Rediscounting को उद्देश्य को लागि, Bundesbank आफ्नो लक्ष्य सम्म पुग्न सक्छ। बैंकले आफ्ना ग्राहकहरु लाई परिवर्तनको रूपमा सुरक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्दछ। ब्याज कटौती अन्तर्गत, यी बाँकी रहेका अवधिको लागि खरिद गरिन्छ। छुट्याइएको विनिमय रकम तुरुन्तै भुक्तानी गरिन्छ। क्रेडिट संस्थाहरू मुख्य रूपमा परिवर्तनीय सामग्रीहरूमा रूचि राख्छन् जुन संघीय रिजर्भको लागि योग्य छन्। Rediscounting हुन सक्छ पुन: ताजा गर्न।
छूट ऋणको लागि कानूनी आधार
परिवर्तन व्यवस्था छुट क्रेडिट र लागू नियम लागि उचित कानूनी आधार प्रदान गर्दछ। §§ 433 एफएफ। BGB यी प्रावधान फेला पार्न। पैसा उधारो को प्रदर्शन परिवर्तन ठीक परिभाषित छन्। बिल छुट क्रेडिट र संघीय नियमहरु बैंकहरू को क्रेडिट नीति 19 छैन। 1 Bundesbank ऐन पत्ता लगाउन § अन्तर्गत 1 अनुच्छेद छन्।। डिस्काउंट क्रेडिटको विपरीत हो Akzeptkredit.
यसको अर्थमा छूट क्रेडिट
ड्यूश बन्डेसबैंकको छूट व्यवसाय मौद्रिक नीति शक्तिका लागि ईसीबीमा हस्तान्तरण गरी रोकिएको छ। डिस्काउंट दरमा यो परिवर्तन जनवरी 1999 बाट अवस्थित छैन। पहिले त्यहाँ सम्भव थियो कि बैंकहरूले बन्डेसबैंकमा छुट दरमा खरिद गरिएको बिल पुन: विभाजन गर्ने संभावना थियो। निस्सन्देह, यस अवस्थामा पनि, एक राम्रो क्रेडिट मूल्याङ्कन आवश्यक थियो। छूट व्यवसाय सामान्यतया यसको महत्वको केहि गुमाएको छ, किनकि यो तथ्य हो कि कुनै पनि पुन: विभाजन लेनदेनको युरोपेली केन्द्रीय बैंकले गरिरहेको छैन। तथापि, व्यक्तिगत बैंक अझै पनि एकै समयमा बिल खरिद गर्दै छन्, र एकै समयमा उनी ऋण बन्द छन्, तर यो ज्यादातर विदेशी व्यापार हो।
अघिल्लो लेखग्यारेन्टी शुल्क
अर्को लेखरचनात्मक सम्पत्तिको